Ukulanda kwe-SplikTV Apk Kwe-Android [Ama-movie+Uchungechunge] - I-Luso Gamer
I-SplikTV Ukulanda Apk Kwe-Android [Ama-Movies+Series]
Ukusakaza ama-Movie nama-Series e-premium kwakuhlala kubhekwa njengento ebizayo. Ngoba izindleko zokubhalisa zingadlula amakhulu amadola. Ngakho-ke sigxile ekufinyeleleni kwamahhala nokulula kumavidiyo lapha sibuyile nge-SplikTV Apk.
Empeleni, i Uhlelo lokusebenza lwe-Movie iwumthombo ongcono kakhulu waku-inthanethi ovumela abasebenzisi be-Android ukuthi basakaze. Okuqukethwe kokuzijabulisa okungenamkhawulo mahhala ngaphandle kokubhalisa noma ukubhaliswa. Abakudingayo inguqulo yakamuva yefayela le-Apk.
Khumbula ngaphandle kokuba noxhumano lwe-inthanethi oluzinzile, akunakwenzeka ukusakaza amafilimu. Nokho uma kucatshangelwa ukunethezeka kombukeli, lapha ochwepheshe bafaka amaseva asheshayo. Ngakho-ke uthanda ukusakaza ukuzijabulisa okungapheli ngeplatifomu bese ulanda i-SplikTV App.
Iyini i-SplikTV Apk
I-SplikTV Apk iyindawo yokuzijabulisa eku-inthanethi lapho abasebenzisi be-Android bengabuka ama-Movie angenamkhawulo nochungechunge. Ngaphezu kwalokho, abathuthukisi futhi bengeza izigaba eziningi ezihlobene ne-TV Shows kanye ne-IPTV's. Nokho, asikaze sifinyelele lezo zigaba okwamanje.
Kungani siphoqa abathandi bokuzijabulisa ukuthi bafake uhlelo oluthile. Uma abantu bebenokufinyelela okuqondile ezinkundleni ezidumile eziku-inthanethi? Isizathu salokho kungenxa yezindleko ezibizayo kanye nezimali zokubhalisa zanyanga zonke.
Siyavuma, kunenqwaba yezinye izinkundla ezidumile ezifinyeleleka ku-inthanethi. Nokho ukuhlola lezo zingxenyekazi ezidumile kudinga ilayisense yokubhalisa eyi-premium. Ngaphandle kokuba nelayisensi, akunakwenzeka ukufinyelela kulawo mawebhusayithi ochwepheshe.
Ngakho-ke ukugxila ezindlekweni ezibizayo kanye nokuqukethwe okuqondene nezwe elithile. Lapha ekugcineni siphumelele ukuletha i-SplikTV Android. Lokho kumahhala ukulanda futhi akudingi ukubhalisa noma ukubhaliswa ukuze ufinyelele kudeshibhodi enkulu namavidiyo.
Usayizi 4.9 MB
Igama lephakheji com.splikdev.tv
Iyadingeka i-Android 5.1 no-Plus
Isigaba Apps - Ezokuzijabulisa
Abakudingayo inguqulo yakamuva yefayela le-Apk. Lokho kuyahambisana nawo wonke ama-smartphones e-Android. Kusuka lapha abasebenzisi be-android bangalanda kalula ifayela lohlelo lokusebenza lwakamuva. Vele ulande uhlelo lokusebenza olubuyekeziwe, bese uluhlanganisa ngaphakathi kwe-smartphone.
Ngenkathi sijula ​​sithole izinto eziningi ongakhetha kuzo ngaphakathi. Lezo Izigaba Ezicebile, Isihlungi Sosesho Ngokwezifiso, Isikhumbuzi Sesaziso, Amaseva Asabelayo, Isidlali Sevidiyo Esakhelwe Ngaphakathi, Isiphathi Sokulanda kanye Nenketho Yokusetha enemininingwane njll.
Sesivele sisho Ngamaseva Asabelayo kodwa sikhohlwe ukuhlanganisa leli phuzu elengeziwe. Lawo maseva azolanda izibukeli ngokuzenzekelayo uxhumano lwe-inthanethi. Ake sithi uma isibukeli sinenkinga yokuthola uxhumano lwe-inthanethi olushelelayo.
Bese amaseva asabelayo azolungisa ngokuzenzakalelayo ikhwalithi yokusakaza futhi aqinisekise ukusakaza okuqhubekayo. Isihlungi sokusesha ngokwezifiso sizosiza abasebenzisi be-android ekutholeni amafayela ngokushesha. Isikhumbuzi sesaziso sohlelo lokusebenza sizosiza ekugcineni abasebenzisi benolwazi lwakamuva mayelana nokulayisha nezibuyekezo.
Isidlali sevidiyo esakhelwe ngaphakathi singasiza ukwenza ngendlela oyifisayo isitayela sokubuka samanje. Futhi umphathi wokulanda uyaqinisekisa ukuthi ukusakaza kunikezwa ngemodi engaxhunyiwe ku-inthanethi. Uma uthanda zonke lezi zici zohlelo lokusebenza bese ufaka i-SplikTV Download.
Izici Key of The Apk
I-Apk imahhala ukulanda.
Ukufaka uhlelo lokusebenza kunikeza ukuzijabulisa okungenamkhawulo.
Lokho kufaka phakathi ama-Movie nochungechunge.
Izinhlelo ze-TV namaDokhumentari nazo ziyafinyeleleka.
Awekho ama-IPTV atholakalayo ukuze uwafinyelele.
Isihlungi Sokusesha Ngokwezifiso sizosiza ekutholeni amafayela kalula.
Isikhumbuzi sesaziso sizosiza ukugcina abasebenzisi besesikhathini.
Azikho izikhangiso eziqondile ezivela eceleni ezivunyelwe.
Uhlelo lokusebenza lulula.
Uyilanda Kanjani i-SplikTV Apk
Uma kuziwa ekulandeni inguqulo yakamuva yamafayela e-Apk. Abasebenzisi be-Android bangathembela kuwebhusayithi yethu ngoba lapha kuwebhusayithi yethu sinikeza kuphela amafayela e-Apk ayiqiniso nawoqobo. Ukuqinisekisa ukuvikeleka komsebenzisi kanye nobumfihlo.
Siqashe ithimba lochwepheshe elakhiwe ochwepheshe abahlukahlukene. Ngaphandle uma siqinisekile ngokusebenza kahle kwamafayela e-Apk. Asilokothi sinikeze lezo ezingaphakathi kwesigaba sokulanda. Ukulanda inguqulo ebuyekeziwe ye-SplikTV 1.3 sicela uchofoze isixhumanisi esinikezwe ngezansi.
Ngabe Kuphephile Ukufaka I-Apk
Ifayela lohlelo lokusebenza esilethula lapha ngelangempela futhi alidingi ukubhaliswa. Noma ingadinga ikhodi yokusebenzisa. Nokho ikhodi ingatholwa ngokuqondile kuwebhusayithi esemthethweni. Ngemva kokufaka uhlelo lokusebenza asitholanga nkinga eqondile ngaphakathi.
Inani elanele lezinhlelo zokusebenza zokuzijabulisa ezifanayo zishicilelwa lapha kuwebhusayithi yethu. Ukufaka nokujabulela lezo ezinye izinhlelo zokusebenza sicela ulandele izixhumanisi. Okukhona I-Wovie TV Apk futhi HDO Player apk.
Uma uwedwa, ubambeke endaweni eyodwa futhi awutholanga omunye umsebenzi ngaphandle kokulala. Bese esimeni esinjalo, sincoma abasebenzisi be-Android ukuthi bafake i-SplikTV Apk. Lokho kuyafinyeleleka ukufinyelela kuwebhusayithi yethu ngokuchofoza okukodwa mahhala.
Izigaba Ezokuzijabulisa, Apps Amathegi Uhlelo lokusebenza lwe-Movie, SplikTV Android, SplikTV Apk, Uhlelo lokusebenza lwe-SplikTV, Ukulanda kwe-SplikTV Imeyili kwemikhumbi
I-Wovie TV Ukulanda kwe-Android [Ama-movie]
I-Speed ​​​​Followers Ukulanda kwe-Android [Ithuluzi le-Insta]